घरमा बन्डडा थप्दै: जब यो निर्माण गरिन्छ
यो सधैं सम्भव छैन कि एक बन्डडा घर को निर्माण को समयमा बनाइयो। हाम्रो देशमा सामान्यत: सबै कुरा बिल्कुल विपरीत छ - घरको लागि बन्डडाको विस्तार हुन्छ जब घर पहिल्यै obzhit छ। अधिकांश मानिसहरूले यस कोठा बिना घर किन्नु मात्र यसको आवश्यकता कम गर्दछन्। तर यो पनि केहि छ कि बन्डडा को अगाडी निर्माण को लागी योजनाहरु छन् । यी कामहरू गर्न सजिलो कार्य होइन। तिनीहरू धेरै जटिलताहरू र डिजाइनको सर्तहरूमा विशेषताहरू मान्छन्, जुन बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यो काठको घरको बन्डडाको विस्तार भएको छ जुन त्यस्ता विशेषताहरू छन्।
सामान्यतया, निर्माणको निर्माणमा परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित कुनै निर्माण कार्य, यसको विशेषताहरू परिवर्तन गर्नुहोस्, र यही कारणले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ। केवल यसको पछि यो पुनर्निर्माण कार्य, पुन: विकास, विस्तार र अन्य समान कार्यहरू सुरु गर्न सम्भव छ। यस्तो जिल्ला निकाय प्रत्येक जिल्लामा अवस्थित छ, यसको प्रमुख वास्तुकारको नेतृत्वमा। यो यहाँ छ कि तपाईलाई आफ्नो भवनको ड्राफ्ट भर्खरै सबै भविष्यका परिवर्तनहरू (यस अवस्थामा यो घरको बन्डडाको विस्तार हुनेछ) र स्वामित्वको दस्तावेज हुनेछ। डिजाइन सक्षम व्यक्तिहरूलाई, आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायीहरूलाई सौंपायो। परियोजना र यसको अनुमोदन अधिकतम दुई महिना लाग्छ। यदि तपाईंको पक्षमा निर्णय गरिन्छ भने, तपाईं निर्माण गर्न अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ। काम गर्दा, तपाईंले प्रोजेक्ट दस्तावेजको मानदण्डहरू पछ्याउनु पर्छ, अन्यथा तपाईंलाई यो परियोजनामा संकेत गरिएको रूपमा पुन: पुन: गर्न सोधिने छ। जब घरमा बन्डडाको विस्तार पुरा भयो, तपाईंले वस्तु पुन: दर्ता गर्न आवश्यक छ।
सबैले सही कुरा गर्दैन - तिनीहरू पहिला निर्माण गर्छन्, र त्यसपछि बाहिर निस्कन्छन्। र प्रायः यो एक टाउको दुखाइ र दावी संग समाप्त हुन्छ। यसबाट बच्नको लागि, कानून अनुसार आवश्यक सबै काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
घरको लागि एक बडाडाडा जोड्नुको आफ्नै सबटटाइजिङ छ र न केवल निर्माणको कानुनीकरणको आधारमा। यो पनि ध्यान दिइयो तथ्य यो कि ठाँउको कोठाको आवश्यकता पनि हुन्:
Verandah सौंदर्यवादी सुन्दर हुनुपर्छ, यो हो, यो अधिग्रहण घर को रूप मा राम्रो तरिकाले को निर्माण गर्नु पर्छ;
आधार को बिछाने त्यसै तरिका मा राख्नु पर्छ जस्तै मुख्य ढांचे मा, जो स्किव र विस्थापन को रूप मा यस्तो समस्याहरु लाई बचाउन मा मदद गर्दछ।
यदि यी आवश्यकताहरू पूरा भएमा, बडाडाले तपाईंलाई लामो समयको लागि सेवा गर्नेछ, यसले असामान्य मरम्मत कार्यबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ।
घरलाई बन्डडाको संलग्न (उनीहरूको धेरै तस्विर लेखमा दिइएको छ) लाई सामान्यतया साधारण भवनको साथ संयुक्त हुनुपर्छ, जुन सौंदर्यशास्त्रको उल्लङ्घन हुँदैन। कहाँ निर्माण गर्न गाह्रो छ, यदि मुख्य भवन काठको बनाइन्छ भने, विस्तारको लागि प्रस्तावित सामग्री पूर्ण फरक छ। यो डिजाइन कति मजबूत र टिकाऊ छ? यहाँ सबैले घरको उमेर, आधार को गुणवत्ता, माटोमा निर्भर गर्दछ। कठिनाई पनि यस तथ्यमा छ कि काठको घरहरू समय संग बसेको सम्पत्ति छ, र यस अवधिमा एक यस्तो एक्स्टेन्सन निर्माणको बारेमा सोच्ने आवश्यकता पर्दैन। सामान्यतया, एक verandah, उदाहरण को लागि, फोम कंक्रीट को बने एक "स्पाइक-नाली" को तरिका मा एक काठ को घर संग जोडिएको छ, जो भवनहरु लाई स्वतंत्र छ र कुनै पनि तरिका मा एक दूसरे को प्रभावित गर्न को अनुमति दि्छ।
दीवारमा छेद कसरी ठीक छ?
पोपिपाइलीन पाइपहरूको स्थापना पैसा बचत गर्न उत्तम तरिका हो।
साइडिंगको साथ कसरी एक घर सिलाई गर्ने? पेशेवरहरूबाट सुझावहरू
संगमरमर फर्श: क्लेडिंग को लागी सामाग्री को चयन कसरि गर्नुहोस
मखमली प्रभावसँग पर्खालहरूको लागि प्यान्ट। कुनै पनि आन्तरिक लागि असामान्य समाधान
सामान्य पानीको दबाब के हो?
घरेलु उल्टो असमस पानी फिल्टर
भाषा संस्कृति गार्ड को व्याकरणिक नियम
"Ekodaks" (मलम): मद्दत गर्छ के निर्देशन, समीक्षा
संसारमा सबै भन्दा ठूलो ताल
मोबाइल फोन नोकिया 6500 क्लासिक: एक अवलोकन, सुविधाहरू, र मालिकको समीक्षा
Vorskla (नदी): विशेषताहरु र फोटो
Footballers पत्नीहरू कसरी सफल थाहा
एल्गोरिदम के हुन् र के तिनीहरूले लागि हो?
ट्याब्लेटको "InSheyp": ग्राहक समीक्षा
बाल सदन मा Rospotrebnadzor के गर्ला? पूर्वप्राथमिक शैक्षिक संस्थाहरू मा खाना नियन्त्रण